musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Air Astana Inodzokera Kubatsiro
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kazakhstan Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kukura kwemusika kwakasimba uye kuda kwekufamba nendege parwendo rurefu rwezvitima kwashandura Kazakhstan kuita musika wepasi pano unokurumidza kukura.
Iwo maviri mabhurani, Air Astana uye yedu LCC FlyArystan, ese ari maviri akaita zvakanaka munzira dzekumba.
Vapfuuri vakatakurwa neAir Astana Boka rakawedzera ne91% kusvika 2.97 mamirioni.
Kunyangwe iko kudzoreredza kuchizadzikiswa kuchazouya kumakwikwi pakati peECVID akasiyana uye jekiseni kutora.
Kazakhstan's Air Astana Group yakanyoresa mari inosvika madhora mazana mana nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora kwemwedzi mitanhatu yekutanga ya4.9, ichipora kubva pakurasikirwa nemadhora mazana masere emadhora emadhora ekuAmerica kusvika munaJanuary kusvika Chikumi 2021. Vatakuri vakatakurwa vakawedzera ne66.2% kusvika 2020 mamirioni, ayo 91 mamirioni akatakurwa munzira dzepamba, kuwedzera kwe2.97%
Achitaura nezve shanduko, Mutungamiri & CEO Peter Foster ”Mhando mbiri idzi, Air Astana uye yedu LCC FlyArystan, vese vakaita zvakanaka munzira dzekumba. Kukura kwemusika kwakasimba uye kuda kwekufamba nendege parwendo rurefu rwezvitima kwachinja Kazakhstan kuita musika wepasi pano unokurumidza kukura, iine 31% yekukura kwevanofamba pamusoro pe2019, pasina mubvunzo inokurudzirwa ne FlyArystanMari dzakaderera zvikuru. ” FlyArystan yakatangwa muna Chivabvu 2019.
Ipo simba repasi rose richiri pa45% yezinga re2019, Foster akataura kuti "goho repamusoro munzira dzenzvimbo, pamwe nekudiwa kukuru kwenzira dze'kurarama" kuMaldives, Gungwa Dzvuku, Montenegro, Dubai, Turkey, Georgia neSri Lanka , vakabatsirawo mukutendeuka, vachibatsirwa nematarenda ekutakura zvinhu nguva dzose paBoing 767 yedu ”.
Foster akayambira nezve nhungamiro yeakasara egore zvakadaro. “Nhamba dzenyaya dzeCOVID dzave kufamba zvakare nenzira isiri iyo muCentral Asia nenyika zhinji kuenda kwatiri kubhururuka. Kunyangwe kudzoreredza kuchizogadzikika kuchauya kumakwikwi pakati pezvakasiyana zveECVID nekutora mishonga. ”
Air Astana mubatanidzwa wevane Samruk Kazyna Wealth Fund (51%) uye BAE Systems PLC 49%). Parizvino inoshanda ndege makumi matatu neshanu ayo gumi A36 ari kuitwa neFlyArystan.